SONY Ericsson Live နှင့် Walkman WT19 Root လုပ်ပြီးမြန်မာဖောင့်ထည့်နည်း
ကို root လုပ်ပြီး Fontchanger နဲ့ အသုံးပြုပြီး မြန်မာဖောင့်ထည့်နည်းလေးပါ။
root လုပ်ပြီး မြန်မာစာဖောင့်အတွက် fontchanger ကိုအသုံးပြုတာ ဖုန်းမှာ
original ပါတဲ့ Japanese,Chinese font တွေကို ပြန်ပြီးအသုံးပြုချင်တဲ့သူတွေအတွက်
fontchanger နဲ့ အခုနည်းလမ်းလေးက Sony Ericsson WT19I ကို ဖုန်း OS ပြန်မတက်တာတွေမဖြစ်ပါဘူး။
Android version 2.2 (Froyo) firmware နှင့်အထက် အခြား Android Phone တွေမှာလဲ
အခုနည်းလမ်းနဲ့ Root လုပ်လို့ရပါတယ်။
Sony Ericsson Android OS သုံးဖုန်းတွေမှာ root လုပ်ဖို့ မိမိကွန်ပြူတာမှာ
sony ericsson companion sofware ပထမဆုံး Install လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။
Driver Install လုပ်မထားပဲနဲ့ Root လုပ်ဖို့ အဆင်မပြေနိူင်ပါဘူး။
root လုပ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ root tool များကို download ဆွဲပါ
sony ericsson companion sofware အားရယူရန်
media fire ဖြစ် SuperOneClick Tool v2.3.3 အားရယူရန်
Direct link ဖြစ် SuperOneClick Tool v2.3.3 အားရယူရန်
ဥပမာ အနေနဲ့ root လုပ်မဲ့ Sony Ericsson WT19I ရဲ့အချက်အလက်ပါ
Sony Ericsson WT19I ကို root လုပ်ပြီး မြန်မာဖောင့် ထည့်နည်း
Root လုပ်ဖို့တွက် (Super One Click Root.rar ) ဖိုင်ကို Download ဆွဲပါ။
Desktop မှာ Download ဆွဲထားသော (Super One Click Root.rar ) ဖိုင် ကိုဖြည်ပါ။
Root လုပ်မဲ့ Phone ကို USB Cable ကွန်ပြူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပါ။
Phone Setting>>Applications>>Unknown sources နှင့် Development>>မှ
USB debugging ကို Enable လုပ်ပေးပါ။
ဖြည်ထားသော (Super One Click Root.rar ) ဖိုင်မှ SuperOneClikc.exe ကို
ကလစ်၂ချက်နှိပ့်ပြီး Run ပေးပါ။
Root button ကို ကလစ်နှိပ်ပေးပါ။
root အတွက် Super One Click က အချိန် စက္ကန့် ၂၀ အလုပ်လုပ်နေပါလိမ့်မယ်
Root install has completed! Would you like runatest ? box ပေါ်လာလျှင်
No ကိုရွေးပြီး ကလစ် နှိပ်ပေးပါ။
အခုအဆင့်တွေ မှန်ကန်စွာပြီးရင်တော့ မိမိဖုန်းမှာ Superuser ရရှိပြီး Root လုပ်လို့အောင်မြင်သွားပါပြီ။
Root လုပ်ပြီးတဲ့အခါ Phone ကို Restart လုပ်ပေးပါ။
Root လုပ်ပုံကို ပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်
Root ကို အောင်မြင်စွာ ပြလုပ်ပြီးပြီဆိုလျှင် မြန်မာစာဖောင့်ထည့်ဖို့အတွက် ရှေ့ဆက်သွားလိုက်ရအောင်
Fontchanger ကိုသုံးပြီး မူရင်း Japanese,Chinese font မပျောက်အောင် မြန်မာဖောင့်ထည့်နည်း
fontchanger ကို install လုပ်ပေးပါ
fontchanger application ထဲသို့ဝင်ပေးပါ
တချို့ဖုန်းတွင် fontchanger application တွက်
busybox တောင်းပါက busybox ကို install လုပ်ပေးပါ
zawgyi.ttf ကို ဖုန်းရဲ့ SD ကဒ်ထဲသို့ ကူးထည့်ပေးပါ
Root Explore ကို install လုပ်ပေးပါ
Root Explore application ထဲသို့ဝင်ပေးပါ
မိမိဖုန်းမှာ root လုပ်ထားလို့ Sueruser premission တောင်းလျှင် allow လုပ်ပေးပါ
sdcard—>မိမိထည့်ထားသော zawgyi_one.ttf ရှိတဲ့ ဖိုဒါဆီသို့သွားပါ—>zawgyi_one.ttf ဖိုင်ကို ဖိပြီး Copy ကူးပါ
ပြီးလျှင် ဘတ်ခလုတ် နှိပ်ပြီး fontchanger ဖိုဒါဆီသို့သွားပြီး past လုပ်ပါ
Home Screen သို့ပြန်သွားပြီး fontchanger software ထဲသို့ဝင်ပါ။
ခုနကထည့်ထားသော ဇော်ဂျီဖောင့်ကို တွေ့ရပါမယ်
ဇော်ဂျီဖောင့်ကို နှိပ်ပြီး set ကိုရွေးပြီး နှိပ့်ပေးပါ
apply , preview နှင့် cancel ပေါ်လာလျှင်
rebootnow နှင့် reboot later ပေါ်လာလျှင် rebootnow ကိုမနှိပ်ပဲ
Power button ကိုနှိပ်ပြီး Power ပိတ်ပေးပါ။
( fontchanger နဲ့ ဖုန်းကို restart ချပေးလျှင် ဖုန်းပြန်အတက်မှာ
တခါတလေ ဖုန်းပြန်မတက်တာတွေ ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ )
ကျွန်တော်ကတော့ အခုနည်းလမ်းလေးနဲ့ ပြုလုပ်ပါတယ်။
Power ပိတ်သွားပြီဆိုလျှင် ၁ မိနစ်လောက် ခဏစောင့်ပေးပါ။
ပြီးလျှင် Power button ကိုပြန်နှိပ်ပြီး ဖုန်းကိုဖွင့်ပါ။
အဲဒီအဆင့်တွေ ပြီးသွားလို့ ဖုန်းပြန်တက်လာတဲ့ချိန်မှာ မူရင်းတရုတ်ဖောင့်မပျောက်ပဲ
Root Explore.apk အားရယူရန်
Zawgyi_One.ttf font အားရယူရန်
Sony Ericsson Live with Walkman WT19I ကို root လုပ်ပြီး မြန်မာဖောင့်ထည့်နည်းအတွက်
အခုနည်းလမ်းလေးနဲ့ အဆင်ပြေပြီး ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။